Kugadzirwa kweiyo iPhone 13 kuchaderedzwa nematambudziko ekushomeka kwezvikamu | IPhone nhau
Kugadzirwa kweiyo iPhone 13 kuchaderedzwa nekuda kwematambudziko ekushomeka kwezvinhu
Pakutanga, zvese zvakaratidza kuti Apple yaisazove nematambudziko nekugadzirwa kweiyo iPhone 13 kunyangwe kushomeka kwezvinhu. Iye zvino nhepfenyuro inozivikanwa Bloomberg inoratidza kuti muCupertino vakamanikidzwa kudzora mwero wekugadzira weiyi maPhones Uye zvechokwadi kudonha uku mukugadzira kuchakanganisa kutengesa kwanga kurongwa pakutanga.
Yaitarisirwa kusvika pamamirioni gumi iPhone 10 yakatengeswa gore rino asi nhamba yacho yaigona kuderedzwa zvakanyanya nekuda kwekushomeka kwema semiconductors. Pakatanga kugadzirwa kwemhando idzi dze iPhone 13, zvaitarisirwa kuburitsa angangoita mamirioni makumi mapfumbamwe, ikozvino nematambudziko ari paBroadcom neTexas Instruments iyo nhamba ichadzikira.
Izvi zvinoonekwa mumazuva ekuendesa zvigadzirwa zvako
Patinopinda webhusaiti yeApple tinoona kuti kana uchiisa odha yeiyo nyowani iPhone 13 modhi kana kunyange ichangoburitswa Apple Watch Series 7, mazuva ekuendesa anodarika mwedzi mune dzimwe nguva. Ichi chaisave chinhu chakajairika mukutangisa kweApple, kunyange chiri chokwadi kuti pakutanga kwekutengesa iwe unogona kugara uchiona kushomeka kwesitoko. Mune ino kesi zviri nekuda kwematambudziko nezvinhu zvacho uye muenzaniso wakajeka ndizvo zvatinoona mumafekitori emota, ayo ari kutambura zvakanyanya kupfuura makambani ari muchikamu chehunyanzvi senge Apple.
Pakutanga zvakanzi kubva kuBloomberg kuti Apple inogona kuwedzera kugadzirwa kweiyi iPhone 20 ne13% zvichienzaniswa neiyo iPhone 12. yakaburitsa gore rapfuura. Zvino zvinoita sekunge iyo data haina kunyatsoratidza kuwedzera kwekugadzirwa, Asi kupesana kwakazara. Tichaona kuti zvinokanganisa sei kutengeswa kwechishandiso munguva pfupi uye yakareba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 13 » Kugadzirwa kweiyo iPhone 13 kuchaderedzwa nekuda kwematambudziko ekushomeka kwezvinhu
Idzo gumi Dzakanyanya Underrated Zvimiro muIOS 10 [VIDEO]
watchOS 8.0.1 inowanikwawo kurodha pasi